Gel hoso-doko, Gel-polika, Gel mpanorina - HATSARATRA COLOR BEAUTY
Hatsaran-tarehy vaovao loko ...
Tongasoa eto hifandray aminay, manantena ny hiara-mandroso aminareo izahay amin'ny indostrian'ny poloney amin'ny alàlan'ny toe-javatra mandresy!
New Color Beauty dia orinasa matihanina azo antoka indrindra amin'ny Gel Polish any Shina.
Hatramin'ny 2010, izahay dia mirotsaka amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana, fivarotana ary serivisy vokatra UV Gel Poloney matanjaka be.
Ny vokatra gel dia misy: gel dingana telo, gel roa dingana, gel iray dingana, akanjo ambony sy base, gel mpanorina, polygel, gel hanamafy, gel fandokoana, gel miloko madio, gel platinum, gel transfer, gel Embossing sns.
Misy loko maherin'ny 2000 ary miasa mafy ny ekipan'ny R&D, loko sy gel maro no miditra ao…
ao anatin'izany ny serivisy fantsika, ny vokatra fantsika ary ny fiofanana hoho, sns.
nisy maherin'ny 40000 ireo orinasa vaovao mifandraika amin'ny fantsika tamin'ny telovolana faharoa, fitomboana 6,5% isan-taona.
Fanadihadiana momba ny indostria manerantany
Ny vahaolana natolotray ho an'ny tsirairay
mahatakatra ny filàna manokana
Polisy matevina mafy ho an'ny fanitarana
Alefaso poleta fantsika gel
Nail Art Mamorona gel
Lazao tamim-pahatokian-tena ny maha-vehivavy anao amin'ny alàlan'ny vokatra New Color Nail Art
Fanangonana poloney miloko makaron
Miloko madio tsy misy pentina Milentika amin'ny Gel Polish
Color Gel Poloney
Aurora Cat Eyes poloney
Ice Tea Crystal loko Gel Nail Poloney
Poly Gel ho an'ny fanitarana sy famolavolana nohomboana
23 / Novambra
Ampianaro anao ny fomba fanesorana ny poloney gel f ...
Mbola tadidiko ny fahitako olona marobe nitaraina momba ny taona vaovao tamin'ny fiandohan'ny taona vaovao. Noho ny Covid-19, tsy nampoiziko fa aorian'ny karazana akanjo mandry, ny manicure sy ny loko ...
21 / Novambra
Momba ny gel UV Nail UV, miloko ...
Nail UV gel poloney poloney loko miloko izao dia azo raisina ho toy ny fandidiana mahazatra any amin'ny salon hoho. Tamin'ny voalohany, ny hoho dia nozaraina ho fantsika kristaly sy hoho phototherapy, fa izao kosa ny kristaly nai ...